Horonan-tsary fampahalalana COVID-19 marobe - AfricaArXiv
Betsaka ny fampahalalana mivezivezy momba ny COVID-19 - misy azo itokisana kokoa noho ny hafa. Ho an'ny olona maro dia mahasahy mandamina hafatra amin'ny alàlan'ny hafatra samihafa - matetika amin'ny fiteny tsy fitenin'ny reny.
Manapa-kevitra izahay fa hamaly izany miaraka amin'ny hafatra fohy sy tsy miovaova izay nomena amin'ny fiteny isam-paritra / eo an-toerana araka izay azo atao. Noho izany antony izany, dia mila ny fanampian'ny mpikaroka sy ny kaominista hafa izahay.
Tanjonay ny hamorona horonan-tsary 2 minitra amin'ny fiteny maro araka izay azo atao izay maneho hafatra tsy tapaka momba ny COVID-19, paikady fitahirizana ary fampahalalana azo avy amin'ny fahasalamana.
sepedi [Afrika Atsimo]
Te hamporisika ny mpikatroka teratany tsirairay aho hanao horonantsary fampahalalam-baovao COVID 19 sy feo ho an'ny fireneny hampahafantatra ny vahoakany momba ny valan'aretina. Miarahaba i Jonathan Sena sy ireo namana amin'ity hetsika ity hampahafantatra ny vahoaka Maasai.
Posted by IPACC - Komity mpandrindra ny vazimba teratany Afrika ny zoma 24 aprily 2020
Playlist feat. Gbagyi, Yoruba, Igbo, Efik, Urhobo, Hausa & Sign Language [Nizeria]
Ahoana ny fandraisana anjara
Jereo ireo hevitra miresaka eto ambany
Adikao amin'ny fiteninao eo an-toerana izany
Manampy fiarahabana, fanambarana tsara, fanomezan-toky fa mety hisy fiovana ny hetsika tsirairay
Sarimihetsika mampiseho ny hafatrao. Mikendry hatramin'ny 3 minitra (haben'ny rakitra> 600MB)
Hamarino amin'ny fomba manaraka ireto horonantsary ireto: COVID_Introduction_LANGUAGE_COUNTRY_dd-MG-2020
Alefaso ao amin'ny YouTube ny horonantsaryo ary fenoy ity endrika Google ity: https://tinyurl.com/COVID19-video-submission.
Mampiasa ny fampahalalana avy amin'ny Google Form dia hamehezana ny lisitr'ireo horonan-tsary ao amin'ny tranokalan'ny Access 2 Perspectives izahay https://access2perspectives.com/covid-19.
Hamoaka horonan-tsary vaovao ihany koa izahay, handroso ny YouTube Access2Persepectives YouTube fantsona ary mizara amin'ny Facebook. Hampifandraisinay ny fanaparitahana amin'ny tranokala Access2Perspectives.
Twitter: Alefaso any amin'ny namana sy fianakaviana ny lahatsaryo, sioka momba azy, zarao amin'ireo mpikarakara vondrom-piarahamonina (fiangonana, sekoly, tambajotra sosialy). Azafady azafady azafady @AfricArXiv ary ampiasao ny tenifototra # COVID19video
Misy olana, fanontaniana na ahiahy, mailaka: info@access2perspectives.com
Te-hahazo antoka isika fa ny horonan-tsary dia zaraina be araka izay tratra. Tsy mamepetra amin'ny fanaparitahana horonan-tsary izahay. Mba hahazoana antoka ny fihetsika feno andraikitra dia manoro hevitra izahay fa ny fizarana rehetra dia fehezin'ny lisansa cc-by Creative Commons (https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/).
Ampahafantaro ny tenanao - avy aiza, manao inona?
Salama, ny anarako dia… avy (tanàna, firenena)
Inona no atao hoe coronavirus?
Coronaviruses dia andiany mifandraika amin'izany fa mahatonga aretina amin'ny taovam-pisefoana ao amin'ny olona.
Ny ankabeazan'ny aretina entin'ny coronaviruses dia malefaka nefa mety ho mafy kokoa.
Vao haingana, aretina vaovao nateraky ny coronavirus, COVID-19, no fantatra ary miparitaka haingana maneran-tany.
Inona no atao hoe COVID-19?
COVID-19 dia aretina vaovao fantatra fa vokatry ny SARS-CoV-2 coronavirus.
Voamarika voalohany tamin'ny marary tamin'ny faramparan'ny taona 2019 tany Wuhan, faritanin'i Hubei, any afovoan'i Shina.
Ity vatan'ny coronavirus ity dia mifindra mora foana eo amin'ny olombelona ary niely haingana nanomboka teo.
Ny COVID-19 dia notaterina tany amin'ny firenena 150 mahery eran-tany miaraka amin'i China, Italia, Etazonia, Espana ary Alemana amin'izao fotoana izao, izay voakasik'izany.
Ny World Health Organisation (WHO) dia nanambara ny fipoahan'ny 2019-20 coronavirus tamin'ny areti-mifindra tamin'ny tapaky ny volana martsa 2020.
Ny soritr'aretina mahazatra indrindra amin'ny COVID-19 dia ny tazo, reraka, ary kohaka maina.
Ireo soritr'aretina dia mazàna ary manomboka manomboka tsikelikely, maharitra maharitra roa herinandro.
Ny ankamaroan'ny olona dia miverina amin'ny aretina tsy mila fitsaboana manokana.
Ny soritr'aretina mivaingana dia nahitana olana misosoka olana, tratrany mifikitra mafy, fisavoritahana ary molotra maizim-bava na tarehy.
Ny vondron'olona sasany dia atahorana ho voan'ny aretina mafy, ao anatin'izany, ny olona zokiolona, ​​ary ireo manana fitsaboana ara-pahasalamana efa misy taloha, ao anatin'izany ny tosidra, olana amin'ny fo, na diabeta.
Azonao atao ve ny mitarika olona hafa raha toa ianao ka maneho soritr'aretin'ny coronavirus?
Ny olona sasany dia mahazo soritr'aretina tena malefaka ary mety tsy mihevitra ny tenany ho marary.
Na izany aza, ny olona aloha amin'ny otrikaretina misy soritr'aretina tena maivana dia hita fa manana ambaratonga avo amin'ny tsimokaretina ary mety mitarika ny olon-kafa.
Raha vao mivoatra ny soritr'aretina dia zava-dehibe ny hanombohana ny fampihenana ny fifandraisana sosialy sy ny 'mitokantokana' mba hampihenana ny mety hihanaky ny viriosy.
Ny porofo dia manondro fa ny aretina kely, tsy misy soritr'aretina kely dia mahazatra amin'ny ankizy. Ny tranga ananan'ireo olon-dehibe mamindra COVID-19 nefa tsy maneho soritr'aretina akory dia efa notaterina ihany koa, na dia tsy fantatra kosa hoe toy ny mahazatra izany.
Inona no tokony hataonao mba ho voaro?
Mba hiarovana ny tenanao dia zava-dehibe ny manasa tànana amin'ny savony sy rano amin'ny fomba tsy tapaka sy tsy tapaka, indrindra rehefa avy nivoitra imasom-bahoaka ianao.
Ny menaka alikaola dia azo ampiasaina koa.
Ilaina koa ny manalavitra ny fikasohana ny maso, ny oronao ary ny vavanao amin'ny tanana tsy misasa.
Raha miely ny vondrom-piarahamoninao ny COVID-19 dia zava-dehibe ihany koa ny mametraka elanelana lavitra eo aminao sy ny mpikambana hafa ao amin'ny vondrom-piarahamonina.
Ataovy azo antoka ny hafa raha voan'ny soritr'aretina ianao
Aorian'ny fifandraisany amin'ny otrikaretina, dia mety hipoitra ny 14 andro aorian'izay.
Raha mieritreritra ianao fa voan'ny olona voan'ny virus, na efa nivoitra ny soritr'aretina dia zava-dehibe ny 'mitokantokana' mandritra ny 14 andro hialana amin'ny fandalovan'ny otrikaretina.
Mijanona ao an-trano raha marary na olona hafa ao an-tokantranonao narary.
Angataho ny fianakaviana, ny namana na ny mpiara-monina raha mahavita manary sakafo ho anao izy ireo ary miala ny fitateram-bahoaka.
Raha mila mandao ny trano ianao dia tokony hanao facemask, ary ho azo antoka ny handrakotra ny vavanao sy ny oronao miaraka amin'ny tenda rehefa mikohaka na mihetsiketsika ianao.
Any amin'ny faritra maro voan'ny virus, ny 'distancing social »dia takiana hanakanana ny fihanaky ilay viriosy.
Inona no dingan'ny fiaraha-monina?
Any amin'ireo faritra voakasik'izany ratsy izany, angatahina ny olona hametraka fepetra 'manalavitra ny fiaraha-monina'.
Tafiditra ao ny fampihenana ny isan'ireo olona manana mandritra ny andro mba hanamaivana ny isan'ny fifindrana.
Betsaka ny olona amporisihina hiasa an-trano sy hisoroka ny fitateram-bahoaka raha azo atao.
Ny fiaraha-miasa amin'ny namana sy fianakaviana (anisan'izany ny fampakaram-bady sy ny krismasy) dia kivy.
Ny olona raisina ho atahorana ho voan'ny aretina mafy dia angatahina hanaraka ny fitsipika henjana kokoa noho ireo mpikambana ao amin'ny fiaraha-monina.
Zava-dehibe tokoa mandritra io fotoana io mba hieritreretana ireo olona marefo ao amin'ny vondrom-piarahamonina ary mijery ny fahasalaman'ny olona rehetra.
Nametraka vondron'olona ifandraisany ny fiaraha-monina, midika izany fa afaka mangataka fanampiana amin'ny mpiara-monina aminy ny olona raha takiana.
Raha takiana mijanona ao an-trano ianao dia ilaina ny manohy fanazaran-tena, mihinana mahasalama ary mijanona ho mazoto.
Fianakaviana sy namana maro no mifampitaona amin'ny fampiasana teknolojia lavitra toy ny telefaona, internet, ary media sosialy.
Fa maninona no ampiharin'ny governemanta ny fanodinana ny fivezivezena sy ny fanaraha-maso?
Ireo politika ireo dia natao mba hampihenana ny fifaneraserana azon'ny olona, ​​manasarotra ny viriosy hiparitaka any amin'ireo vondron'olona.
Amin'ny fanaovany izany dia antenaina fa tsy hihalehibe intsony ny hopitaly sy ny tobim-pitsaboana any amin'ireo faritra voakasik'izany, ary afaka manome fitsaboana amin'ny tranga maro.
Betsaka ny fitondram-panjakana mandrara ny fihaonana be dia be, toy ny fifaninanana sy ny hetsika fanatanjahan-tena.
Ireo faritra hafa manintona olona be dia be, toy ny fivarotana tsy ilaina, toeram-pivarotana sy trano fisakafoanana dia mety ho angatahina hanidy ihany koa.
Ny sekoly sy ny oniversite dia mety ho nakatona koa.
Firenena maro no mametraka fetra fitsangatsanganana, mametra izay mety hiditra sy miala amin'ireo firenena.
Toerana fanondroana hahitana torolàlana voafaritra ho an'ny firenena
Inona no azontsika antenaina amin'ny volana ho avy?
Io ny aretina vaovao, izay mbola mbola tokony hianarantsika bebe kokoa.
Na any amin'ny firenena sasany dia toa mihena ny fihanaky ny aretina, any amin'ny firenena maro hafa no hitantsika.
Zava-miova haingana ny resaka, ary zava-dehibe ny hitandreman'ny olona ny tari-dalan'ny governemanta avy hatrany.
IZA loharanon-karena https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
Ny Ivontoerana ho an'ny Fanaraha-maso sy ny fisorohana aretina. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov
Q&A AfricaArXiv COVID-19 amin'ny fiteny afrikana isam-paritra: https://info.africarxiv.org/qa-around-covid-19-in-regional-african-languages/
Anna McNaughton, University of Oxford, ORCID iD: 0000-0002-7436-8727, Twitter: @AnnaLMcNaughton
Louise Bezuidenhout, University of Oxford, ORCID iD: 0000-0003-4328-3963, Twitter: @loubezuidenhout
Ity lahatsoratra ity sy ny horonan-tsary rehetra dia eo ambanin'izany CC-BY-SA 4.0 fahazoan-dàlana
Hitanisa toy: Bezuidenhout, Louise, McNaughton, Anna, & Havemann, Johanna. (2020, 26 martsa). COVID-19 Fampahalalana marobe amin'ny fiteny maro. Zenodo. doi.org/10.5281/zenodo.3727534